Tag: nke | Martech Zone
Mgbe ahịa Black Friday, ịzụ ahịa Krismas, na ahịa Krismas na-aga n'oge anyị ga-ahụ onwe anyị n'oge ahịa na-agwụ ike nke afọ ọzọ - ọ bụ oyi, isi awọ, mmiri ozuzo, na snowing. Ndị mmadụ na-anọdụ ala n'ụlọ ha, karịa ịgagharị gburugburu ụlọ ahịa. Otu nnyocha nke ọkà mmụta akụ na ụba na 2010, Kyle B. Murray, kpughere na ikpughe na ìhè anyanwụ nwere ike ime ka oriri na ụba anyị dịkwuo mfe. N’otu aka ahụ, ọ bụrụ urukpuru na oyi, ohere anyị nwere imefu ego ga-ebelata. Ọzọkwa, n'ime
Igwe ahia: Mee ka nnwale ọnwụnwa SaaS na nnabata ndị ahịa
Ọ bụrụ na ị na-ere sọftụwia dị ka ọrụ (SaaS), ego ị na-enweta na-adabere na itinye data ndị ahịa na ojiji ngwaahịa na kọntaktị na ọkwa akaụntụ. Ahịa na-enye ndị ahịa na ndị otu ihe ịga nke ọma ikike ịghọta ihe na akpaaka iji mee ka ntụgharị Ọnwụnwa na nnabata ndị ahịa. Azụmaahịa Nwere Uru Abamuru Abụọ Na-eme Ka Ngbanwe Ọnwụnwa - Akara ndị ruru eru dabere na ndị ahịa dabara adaba na nnabata ngwaahịa. Izu ahia nke ihe eji ere ahia na-enye ndi otu ahia gi aka ilekwasị anya na ndi tozuru oke
Autopilot na-ebupụta Insights, Onye Ahịa njem Tracker maka Ndị Ahịa
Wednesday, June 7, 2017 Monday, December 7, 2020 Douglas Karr
82% nke ndị ahịa kwụsịrị ịzụ ahịa na ụlọ ọrụ na 2016 mgbe ha nwesịrị ahụmahụ dị njọ dịka akụkọ akụkọ Mary Treker nke Internetntanetị na-adịbeghị anya. Enweghị data na nghọta nwere ike igbochi ndị na-ere ahịa ka ha ghara ịga n'ihu n'ọrụ ha: data ọhụrụ na-egosi na Otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ndị na-ere ahịa enweghị data na nchịkọta ha chọrọ iji nyochaa arụmọrụ ha, na 82% kwuru na nchịkọta ka mma ga-enyere ha aka ịmalite ọrụ ha. Autopilot na-ebupụta Insights Autopilot amalitela Insights - a
Ndị folks na ReferralCandy emeela ya ọzọ site na nnukwu nchịkọta nke ndụmọdụ inbound maka ịre ahịa ọdịnaya e-commerce na infographic. M hụrụ n'anya nke a format ha na-etinye ọnụ together ọ bụ a nnọọ jụụ ndepụta na a format na-adị mfe na-enye ohere marketers ka i scanomi ma bulie ụfọdụ oké azum yana ndụmọdụ si ụfọdụ ndị kasị mma ụlọ ọrụ ọkachamara si n'ebe. Ndị a bụ 24 Juicy Tips for Ecommerce Content Marketing from Inbound Marketing
Vero: Email akpaaka na Remarketing
Fraịdee, June 27, 2014 Fraịdee, June 27, 2014 Douglas Karr
Vero bụ ozi akpaaka ahịa ahịa email nke gbadoro anya na ịbawanye njikwa na njigide ndị ọrụ. Iji ozi ịntanetị ezubere iche ị nwere ike ịmepụta ụba ego ma melite afọ ojuju ndị ahịa. Martech Zone ndị na-agụ nwere ike ịnweta 45% nke ndenye aha ọnwa 6 nke atụmatụ Vero Small site na iji njikọ njikọ anyị! Vero Email Marketing na-agụnye Onwe onye ahịa profaịlụ - Sochie data banyere gị ahịa gị subscriber nchekwa data. Jiri data ị nakọtara dị ka nke gị
Onye na-aghara aghara na ahịa ahịa
Mgbe m dere na nso nso a banyere oge gara aga, ugbu a na ọdịnihu nke ahịa, otu ebe na-elekwasị anya bụ ịzụ ahịa akpaaka. Ekwuru m banyere otu ụlọ ọrụ ahụ si kewaa n'ezie. Enwere azịza ndị nwere obere njedebe nke chọrọ ka ị dakọtara na usoro ha iji nwee ọganiihu. Ndị a adịghị ọnụ… ọtụtụ na-efu ọtụtụ puku dollar kwa ọnwa na isi na-achọ ka ị na-retool otú gị ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ ka dakọtara ha usoro. Ekwenyere m na nke a na-ewetara ọtụtụ ọdachi